Abathengisi, usebenzisa ividiyo?
NgoLwesibini, Juni 12, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ividiyo ikhule ngokutsiba kunye nemida kwindawo yentengiso yabathengi kule minyaka idlulileyo, kwaye iyakhawuleza kwindlela yayo yokutshintsha okubhaliweyo njengeyona ndlela iphambili yonxibelelwano kwiwebhu. UNielson uxela ukuba kwi-2011, imijelo yevidiyo inyuke ngeepesenti ezingama-31.5 ukusuka kunyaka ophelileyo, ichukumisa i-14.5 yezigidigidi ze-steams, ngaphezulu kwe-2 yezigidigidi zokujonga ividiyo mihla le. Oku kwenza ividiyo njengendawo eqhelekileyo njengokukhutshelwa komculo, ukwabelana ngefoto kunye ne-imeyile.
Nantsi ividiyo entle evela kwiReelSEO ngesihloko:
Ngokusebenzisa amandla evidiyo, iinkampani zinokugqobhoza kuphela umda ekufuneka uguqulwe undwendwe lube ngumthengi… unxibelelwano lomntu. Nazi ezinye iingcebiso zevidiyo yokuncokola:
Musa Iskripthi ividiyo yakho. Fumana amanqaku asisiseko phantsi kwaye uncokole nekhamera. Akunyanzelekanga ukuba ibe (kwaye ayifanele ukuba) igqibelele.
Gcina yakho ividiyo emfutshane… Imizuzu emi-1 ukuya kwemi-3. Yiya ngqo kwinqanaba okanye abantu bayeke ukubukela. Ukuba ividiyo yakho isebenza ixesha elide, sika izithuba uze uzame ukukhawulezisa ikliphu. Rhoqo, ungatsiba isuntswana kwividiyo ngokwenza njalo.
Fumana ifemi yevidiyo ukuze usebenze kwingcali intshayelelo kunye outro ukuba ungadibanisa ngokulula ividiyo yakho kunye nesoftware yokuvelisa ividiyo enje iMovie or Movie Maker.
Rekhoda kwi ingcaciso ephezulu kunye nekhamera yevidiyo elungileyo. I-iPhone inokuba ininzi!
Vala ividiyo yakho ngaphandle kokuthengisa ngokuxelela abantu indlela abanokukubamba ngayo, apho banokufumana khona ulwazi oluthe kratya, njl njl. Abantu babona intengiso mihla le kwaye bangabahoyi… musa ukwenza urhwebo!
Chitha ixesha ubhala a isihloko esinyanzelayo yevidiyo yakho kwaye usebenzise amagama aphambili ngokufanelekileyo. I-YouTube yeyona injini yesibini yokukhangela enkulu!
BTW: Nge- Martech Zone, Siyazi ukuba le yinto enye yesiza ebesilela. Asikabinayo ifomula efanelekileyo ngoku… kodwa hlala apho, iyeza!
tags: Ukunyanzela ividiyovidiyoukuthengisa ividiyo